Nin lagu eedeeyay Kufsi laba haween ah oo Afgooye oo lagu qabtay - Awdinle Online
Wararka laga helayo degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaas uu ka dhacay fal kufsi ah oo loo geystay laba Haweeney ah oo mid waayel ay tahay.
Hal Nin ayaa la sheegay inuu kufsaday labadaas Haween oo mid da’deedu tahay 85 sanno jir, waxaana ninkaas markii uu sameeyay falka, kadib si deg deg ah uu goobta uga baxsaday.
Ciidanka amniga Maamulka degmada Afgooye ayaa tegay goobta uu falku ka dhacay, iyagoona sameeyay howlgalo kala duwan oo lagu raadinayo ninkaas, waxaana markii dambe ay ku guuleysteen inay gacanta kusoo dhigaan ninka.
Intaas kadib Ninka ayaa waxaa Maanta oo Isniin ah la horgeeyay Maxkamadda Gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana Maxkamadda ay amartay in loo wareejiyo dhinaca Magaalada Muqdisho, si sharciga loo horgeeyo.
Wararka ayaa intaas kusii daraya in Haweeneyda da’da ah xaaladeeda Caafimaad laga deyrinyo, isla markaana laga dhigay Xarun Caafimaad oo ku taalla degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Previous articleCumar Filish & Safiirka Midowga Yurub oo kulan xasaasi ah yeeshay+Sawirro
Next articleMuxuu Ra’iisul Wasaaraha Cusub kala hadlay Safiirada Beesha Caalamka?